Ukuphathwa Asset amasevisi Indawo
Ukuthengiselana eyenziwa emakethe eziqashisayo - okuyingozi wonke umuntu. Abanikazi zivame kwesokunxele abaqashile ngobugebengu ifenisha futhi ezingakhokhiwe nocingo. Futhi abahlala kuso abanikazi Angenelisekile yokuxhashazwa amazinga. Indlela yokugwema izinkinga phakathi kwabanikazi nabaqashi? Ukunikeza impendulo yalo mbuzo kusiza ngesevisi ebizwa ngokuthi "ithemba ukuphathwa ezindlini."
Okwakushiwo le sevisi zimi kanje: umnikazi we efulethini kuyinto isivumelwano ithemba nge-ejensi ingcebo, owawuthi ejensi uthola ilungelo ukuqasha impahla yakhe. Le nhlangano, ngaphezu kokuthola eyisakhamuzi nesokuphela kwalesi inkontileka naye ku ukulawula ikusasa sokuhlala kwakhe efulethini, ukuze kulondolozwe amafa akhona kuwo, ukukhokhelwa ngesikhathi esifanele zonke izinkokhelo kunesidingo. Enkonzweni Admin uya wonke umsebenzi okumele wenziwe ngumnikazi indlu. Umnikazi uhlala kuphela ukuze ithole ingeniso ethe.
Le sevisi bayindlala kakhulu emakethe njengoba ephezulu kanye nezinhlobo izindlu. Abanikazi okunethezeka izindlu edonsela ukonga isikhathi kanye nekhono hhayi lokumba izinkinga abantu abaningi abaqashile. A izimakethe zezindlu ejwayelekile, lapho imali sokuqasha ingenye imithombo oyinhloko wemali, kulendawo bakhangwa engaguquki yemali engukheshe ekhokhiwe kanti ukungatheleleki ezingozini eziningi. Trust ukuphathwa uphelele, kanye nalabo abahlala phesheya abangenalo ikhono lokulawula yokuhlala iziqashi iqashwe izindlu. Ukusuka kunoma iliphi izingxenye zomhlaba, bayakwazi ukuthola imali ku- akhawunti kokuhlola ngaphakathi zokukhokha esiqinile, ngaphandle kokuhlupheka kakhulu, hhayi ukuba sikhathazeke ngokuthi isimo efulethini lakhe.
Umnikazi iqala ukuthola imali yakho emuva kokuqasha efulethini ngosuku, owamiswa ngo inkontileka, kungakhathaliseki iziqashi uhlu imali. Kunezinhlobo eziningana lezinketho zokukhokha: ehhovisi le nhlangano, ngokusebenzisa umphathiswa, ikhadi plastic noma i-akhawunti kokuhlola. Ngokuvamile kanye ikota ma-ejensi umlawuli ihlolwe isimo efulethini. Kulezi emihlanganweni, uma babefisa, kungaba khona futhi umnikazi we-efulethini. Uma wephula izimo sokuhlala, umlawuli wenza uphawu oqotsheni wokuhlola impahla kanye Kunconywa inkinga. Uma ukuziba isicelo ekupheleni umnqamulajuqu, ejensi waziphatha ukulungisa. Uma kwenzeka yokwenqaba iziqashi ukukhokha isondlo edingekayo, lemali edingekayo zisuswa emalini isibambiso esenziwe kuye. Esimeni iziyaluyalu ezinkulu kakhulu, ezifana yokungakhokhi lokuqasha noma ukwanda okungagunyaziwe isibalo abahlali, usongo livela lokuthutha. Zikhona nezinye izimo lapho izimo ukuthethwa kwecala enkantolo, kodwa umnikazi ngeke babe ukuchitha ngokwakho isikhathi sabo siqu nezinzwa.
Umlawuli usengakwazi ukushaja inkokhelo kuzo zonke izikweletu kanye Umbuso izikweletu, kubuye imali kusuka party eyodwa noma enye. Ngamanye amazwi, kuba uhlobo "ikhaya Realtor," anikezelwe bonke izimfihlakalo izindlu.
Esimeni exit ezingalindelekile iziqashi efulethini, ejensi iqala ukubheka eyisakhamuzi entsha: umnikazi ikhokhelwa isonto 2 yokuhlala elula free wabheka kumqashi omusha. Seyiphelelwe yesivumelwano, oda umnikazi ithola indawo kusukela eyisakhamuzi, kokuhlola ukuphepha zonke ifenisha kanye nemishini. Ngezinye ukuthola umonakalo, eyisakhamuzi wangaphambili ubophekile ukuba ubakhokhela. In the ukungabikho izimangalo kuso, mortgage lokukhokha izobuyiselwa, kodwa iqiniso ukudluliswa kwempahla kuqinisekiswa imibhalo ezifanele.
OOO "Atlas Iqembu": abasebenzi Izibuyekezo
Inkampani ukuthumela entengiso Shipito - ukubuyekezwa kanye imiyalelo ukubhalisa
Tour opharetha BSI Group ( "UBS Hay Iqembu"): izinkambo eYurophu, ukubuyekezwa
Ikakhulukazi kukhethwa inkampani yezokuthutha
Taxi eMoscow Ivanovo
Ukuzila Ukudla ngosuku amanzi - inketho ephumelela kunazo.
Umkhono we-tattoo - ukukhetha stylish
Registry regedit: ukuqala indlela?
Ubaba oyedwana: ukuthi benzeni uma umama ushiye umndeni
Iphethini "ijazana lasebusuku zezingane hood ': letindlela nemasu lahlukene okukhethwa kukho ukumodeliswa
Lezi ngezintambo ezahlukene izinja
Sinethulela emotweni ukusebenza esihle: "Qashqai"
Vibromassazhery ukukhetha? Umsebenzisi Izibuyekezo ukukusiza
Uyini isifinyezo indaba nendlela ukubhala
Isihloko sothando othandweni lukaPushkin's. U-Alexander Sergeevich Pushkin: izinkondlo ngothando